U hel dabool qurux balaastiig ah oo caag ah shaahaaga xunbada leh!
Binggo! Mason Jar dabool hadiyad Kirismas ah!
Xilliga kirismaska ​​ayaa inagu soo food leh, sidoo kale miisaaniyaddeenna-ciriiriga ayaa nagu sii jira. Haddii aad raadineyso fikrad hadiyadeed oo jaban oo DIY ah, ha u eegin meel dheer. Kuwan daboolka weelka jarjaran ee galvanized waa xulashada saxda ah, oo loo habeyn karo qof gaar ah (ama reerka) ku jira l ...
Sidee loo nadiifiyaa dhalada saliidda ee muhiimka ah?
1. Marka horeba, ka dib isticmaalka saliida lama huraanka ah, warqad nuugaysa oo ku taal afka dhalada, dhalada korkeeda ha is dul taago, ilaa hal maalin, saliida inteeda kalena sidoo kale way daadi doontaa. Ku masax gudaha dhalada adoo adeegsanaya xajmiga ...